Ob. Leencoo Lataa yaalii ODFn biyyatti deebisuuf taasisamee ture irratti ibsa laatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Ob. Leencoo Lataa yaalii ODFn biyyatti deebisuuf taasisamee ture irratti ibsa laatan
Ob. Leencoo Lataa yaalii ODFn biyyatti deebisuuf taasisamee ture irratti ibsa laatan
Angawoonni mootummaa quba wolqabaachuu dhabuun madda rakkoo ta'uu hinoolle
Jilli ODF kan nama sadi ufkeessaa qabu torbee darbe keessa gara Finfinneetti imalee ture. Osoma hinturre, bifa namoonni heddu hineegneen, gara Awurooppaati akka deebi’an taasifaman. Waan ODFn akka dhaabatti, akkasuumas ob.Leencoo Lataa akka nama tokkootti mudate perezidaantiin dhaabichaa ob.Leencoo Lataa ibsa RBOf laataniin ifa godhan.
Akka ibsa Leencootti mootummaan dhaabni isaanii miila isaa Itoophiyaa akka hinseensisneef kan dhoorge sababa mariin osoo hinxumuramin dhufuun isin irra hinturre jedhuun. Osoo mariin hinxumuramin sababa garasitti isaan qajeelche irraa kan gaafataman, ‘yeroo dheeraadhaaf mootummaa akka dhufaa jirru quba qabsiisnee turre. Baatii lama ykn sadi duras xalayaan isaan beeksisnee turre. Gara namoota nujidduu deemaniitiinis dhufaa jiraachuu keenya isaan hubachiisnee turre,’ Jedhan. Akka ibsa isaaniitti maddi rakkoo kanaa harki mootummaa inni bitaafi mirgaa quba wolqabaachuu dhabuu irraa ta’uu hinoolle.
Ob.Leencoon faati viizaa baatii sadii argataniiti kan Finfinnee seenan. Ta’us, murna shakkii ODF fi ob.Leencoo irraa qabuun isaan biyya gadi dhiisan bayuu akka qaban gaafatamuu hinoolle gara shakkii jedhutti isaan geesse.
Tankaarfiin dhaabicha biyyatti deebisuu ammatti milkii dhabuun wolqabatee, ob.Leencoon waa’ee fundura ODF fi jijjiirama dhaaba keessatti ta’uu maluu irrattis yoo jijjiiramni kan jiraatuu gabaasa koreef dhihatu irratti gamaaggamni erga godhamee booda kan murtaa’u akka ta’uudha kan RBO tti himan.
Dhuma irrattis, miseensotaafi deeggartootaaf kan dhaaman kan ta’e hundi qaama qabsoo ta’uu hundi akka hubatuudha. ‘Lola guyyaa tokkootiin hininjifattu. Lola guyyaa tokkootiinis hininjifatamtu,’ jedhuun qabsoo godhan, keessattuu, karaa dipiloomaasiitiin cimsanii kan itti fufuuf deeman ta’uu akeekaniiru.
Interview ob.Leencoon Raadiyoo Bilisummaa Oromoo wolliin godhan as tuquun dhageeffadhaa.
Previous articleSomaliland Press: Ethiopia’s Oromos welcome OLF change to ODF, move to Oromia
Next articleGalmi aadaafi seenaa Oromoo magaalaa Finfinneetti baname